I will donate and contact you soon, Bro.
ဟုတ်ကဲ့ပါ မအိရေ ရန်ကုန် မန်းလေးတွေက အလှူငွေ စုဆောင်းကောက်ခံပေးမဲ့ ရွာသူားများကို အကူအညီတောင်းပါတယ် အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့ ရန်ကုန်က ကိုအမတ်မင်း မအိကြည်ပြာစိုး ကိုထူးဆန်း မန်းလေးကတော့ ကိုပေါက် ကိုပေတို့က ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် ယခုနှစ်အတွက်လည်း သူတို့ကို အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင်ပေါ့
ကျတော်တို့အလုပ်ကတောင် လာမယ့်စနေနေ့ ဝါးနက်ချောင်းကျေးရွာက ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းမှာ စာအုပ်တွေ သွားလှူမို့လုပ်နေတယ်။
အလှူငွေ စုဆောင်းပေးတာကိုရော လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်ခမျ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ အစ်ကိုရာ . . . .
ကထူးဆန်း ကမတ် မအိကြည်ပြာစိုးတို့ ပေါ်မလာသေးဘူးးးးး
လုလုတို့ ကျောင်းတက်တုန်းက အဲ့လို အဖွဲ့ အစည်းတွေ
မရှိသေးတော့ ကလေးများတဲ့မိဘတွေအတွက် အရမ်း
လှူချင် ပါတယ် လို့ 
ကခြင်သဘုံ လုမနဲ့ ဂဗျီးတင် လှူ ဗျစေ…
ကျနော်တို့ အခုလက်ရှိမျိုးဆက်က အခုထက် ပိုကောင်းတဲ့ နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးခဲ့ဖို့
တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာလေးလည်း ပြန် သတိရသွားပါကြောင်းးး
တဆက်တည်း တွေးမိတာက ဗမာပြည် ပညာရေး အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းတွေ
အဖွဲ့အစည်းတွေက ပရဟိတစိတ်နဲ့ စာရေးကိရိယာတွေ ပညာရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းလေးတွေ ထောက်ပံ့နေတဲ့အချိန်မှာ
တကယ် တာဝန်ရှိတဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနဆိုင်ရာတွေ အနေနဲ့
ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနေသလဲ. . .
ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် စာအုပ်တွေ ဈေးလျှော့ရောင်းရုံ
.ကျောင်းမှာ အလှူမခံရတော့ဘူးလို့ ကြေညာရုံ
.ခဲတံတွေ ဗလာစာအုပ်တွေ ခွဲတမ်းနဲ့ ထုတ်ပေးရုံ
ဒါလောက်နဲ့တော့ ကလေးတွေရဲ့ ဘဝကို အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါဘူး
တကယ်က အဲ့ဒီ ပစ္စည်း ကိရိယာတွေ နံရံပေါ်က စာတန်းတွေထက်
တကယ် အသုံးဝင်တဲ့ ပညာ အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပြီး ပေးဖို့
ကျနော့်ညီ ဆယ်တန်း ဖြေထားတယ်။ မြန်မာစာ စကားရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ဗျည်း/သရ တချို့ကို အသံထွက်မှန်အောင်
မခေါ်တတ်သေးဘူး။ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတချို့ကို ဘယ်လိုအသံထွက်ရမှန်းတောင်မသိသေးလို့ လာလာမေးနေရတယ်။
ဆိုတော့ သူတို့ သင်နေတဲ့ပညာတွေအပေါ်
ကျနော် အကြီးအကျယ် သံသယရှိနေပြီ
ကျေးဇူးပါ လေးပေါက်ရေ ဒီနှစ်က ကျယ်ဂေါင်ရောက်နေတဟ်ဆိုလို့ ကျနော် အားငယ်နေတာ အခုလို စကားကြားရတော့ အားတက်မိပါသဗျာ
အဲဒီတနယ်လုံးမှာ ပညာအထူးချွန်ဆုံးကျောင်းသားတယောက်ထဲကို ရွေးလှူလို့ဖြစ်နိုင်မလားသိချင်တယ်ဗျ..
ဥပမာ..။ ချီးမြှင့်ငွေ တသိန်း ဆိုပါစို့..။
ဟုတ်ကဲ့ပါ သူကြီးရေ စီစဉ်ပေးပါ့မယ်။ သူကြီးက ထူးချွန်ကျောင်းသူားဆိုတော့ အထက်တန်းအဆင့်လား အလယ်တန်းအဆင့်လား မူလတန်းအဆင့်လားဆိုတာလေး ပြောပေးပါ သူကြီးဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးပါ့မယ် ခမျ
အောက်မှာ အမတော်ပဒုမ္မာပြောတဲ့.. အတိုင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်..။
ဆုပေးပြီး ပစ်မထားပါဘူး..။ ဘာဆက်လုပ်နေသလည်းသိရအောင်ဆက်စောင့်ကြည့်သွားချင်ပါတယ်..။
ဟုတ်ပါပီ သူကြီးရေ ကျနော် ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ် ထူးချွန်ကျောင်းသူားပြည့်စုံရမဲ့ အချက်လေးတွေ သတ်မှတ်ဦးမလား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရေး တာဝန်ကိုလည်း ကျနော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။သူကြီးမှ ယခုလို စိတ်ဝင်တစားရှိပီး အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုချပြပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျန်သူများလည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး ခမျ
နွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေကို ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းထောက်ပံ့ရင်း ပညာတတ်တာ အကျိုးမဲ့ မဟုတ်ပါလား ဆိုတဲ့ အတွေး ၀င်စေချင်တယ်။
ဇွန်လ (၇)ရက်မှာ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်မယ်ကြားမိတယ်။
အဲဒီ အောင်စာရင်းမှာ (အမှတ်သိရရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့) ဂုဏ်ထူးအများဆုံး ကလေးကို မြန်မာ့ဂဇက် မန်ဘာများက ဆုချတယ် ဆိုတာလေး လုပ်ရင် ဖြစ်နိုင်မလား။
(တီဒုံတို့မြို့မှာတော့ လူရည်ချွန်ရတဲ့ကလေးကို ငွေစုပြီး ဘဏ်စာရင်းဖွင့် ဆုချကြတယ်။)
အစ်မပြောတဲ့ အစီအစဉ်လေးက ကောင်းပါတယ်ခမျ
ဂုဏ်ထူးအများဆုံးဆိုတာထက် အမှတ်အများဆုံး ဆိုတာက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
၁ဘာသာဂုဏ်ထူးက ၃ဘာသာဂုဏ်ထူးထက် အမှတ်များတာလည်း ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လေ။
၅ဘာသာဂုဏ်ထူးက ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးထက် အမှတ်များတာလည်း ရှိသေးတယ်။
ဂုဏ်ထူးများတာနှင့် အမှတ်များတာ ဘယ်ဒင်းကို ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အကြံပြုပေးကြပါဦးဗျို့
မိဘ က ငွေကြေးတောင့်တင်းပြီး ကျူရှင်ထားနိုင် ကျောင်းထားနိုင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်လို့
ကျောင်းတက်ဘို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကို ပိုဦးစားပေးပြီး လုပ်ပေးသင့်တယ် လို့မြင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ထူးချွန်နေတဲ့ကျောင်းသားက သာမန်သူလို ကိုယ်လို မိဘ က ပေါက်ဖွားလာပြီး
တကယ်ကျိုးစားတဲ့ ကလေးဆိုရင် တစ်မျုိး စဉ်းစားတာပေါ့။
လောလောဆယ် အနေအထားမှာ အမှတ်အများဆုံးဆိုတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကို ဦးစားမပေးဘဲ
စာတောင်ဖြောင့်အောင်မသင်နိုင်တဲ့ မူလတန်းကလေးတွေကို ပိုဦးစားပေးစေချင်ပါတယ်။
စာမတတ်တဲ့ ကလေး နည်း နိုင်သမျှ နည်းအောင်ပေါ့
ဟုတ် လေးပေါက်ရေ မိဘအဆင်ပြေလို့ ဘော်ဒါဆောင်ကောင်းကောင်းမှာ ထားနိုင်လို့ ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသားထက် သူလိုကိုယ်လို မိဘတွေထဲကပေါက်ဖွားလာပြီး ပညာထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသူားမျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး မြေတောင်မြောက်ပေးရမှာပါ အထက်တန်းအဆင့်ထက် မူလတန်း အဆင့် အလယ်တန်း အဆင့်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆို ပိုပြီး ထိရောက် အကျိုးများမယ်လို့တော့ တွေးမိတာပါပဲ သို့သော်လည်း လုပ်နိုင်ရင်တော့ အားလုံးကို လုပ်ဆောင်သင့်တယ် ထင်ပါရဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေကြတာချည်းမို့ပါ
ကျုပ်လဲ တတ်နိုင်သမျှလေး ပါဝင်ပါမယ်..
သူကြီးနဲ့ အမတော်များ အတော်ဆုံးကလေးကို ချီးမြှင့်ဖို့ကိစ္စ ဖတ်ရလို့
၁၉၉၁ လောက်မှာ ကျုပ်က အညာမှာ ရောက်နေတုန်း ဘုန်းကြီးတချို့ ဘုန်းကြီးလူထွက်တချို့နဲ့ ရင်းနှီးမိတယ်။
အဲသည်မှာ ပထမကျော်/အထူးအောင် တစ်ပါးပါးကို ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယကာအဖြစ်လျှောက်ထားချင်တယ်ပြောမိတော့
တောင်သမန်တိုက်က ဦးဇင်းညိုက ဒီဖိုးတရုတ်တော့ ထွေးခံစာမိချင်တယ်ထင်တယ်..လို့ ရယ်ရယ်မောမော မှတ်ချက်ချတယ်..
အဲသည် အထူးအောင်တွေဆိုတာ ဒီခေတ်စကားနဲ့ဆို စပွန်ဆာ အင်မတန်များအင်မတန်ကောင်းတတ်လို့
ခြောက်ပြားတပဲနဲ့ ပစ္စည်းလေးပါး ဒကာခံမယ်ဆိုရင် ဆရာရင်းတိုက်အုပ်က ထွေးခံနဲ့တောင်ပေါက်လွှတ်လိမ့်ဦးမယ်လို့ ဆိုတာပါပဲ..။
အပေါ်မှာ ကိုပေါက်မန့်ထားသလိုလေး ကို ပိုတောင် သဘောကျမိသေး…..
လိုတဲ့နေရာ လောင်းကြရင် ပိုကောင်းတာပေါ့နော..
-ဘဏ်အကောင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်နဲ့ ငွေထုတ်လို့ အဆင်ပြေမဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဘဏ်လိပ်စာတွေပေးပါမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မရွှေအိရေ အလှူငွေကို ဒီနေ့က စပြီး လက်ခံလိုက်တော့တာပေါ့ လကုန်အထိ အလှူငွေလက်ခံပါမယ် ၆ လပိုင်းဆို ကျောင်းဖွင့်ပီလေ တစ်ချို့ကျောင်းလေးတွေ မိုးဖြိုင်ဖြိုင်ကျရင် သွားလို့မရတော့လို့ပါ ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် ၂၁၀၀ နှုန်းဖြင့် တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း
အလှူငွေထည့်ဝင်သူများစာရင်းကို ဖော်ပြပေးဖို့ရန်အတွက် အလက်ဇင်း အလင်းဆက်မှ တာဝန်ယူပေးနိုင်လျှင် ယူပေးစေလိုကြောင်း အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်။ ဝိုင်းကြ ဝန်းကြ ကူညီပေးကြပါဦးခမျာ
ပိုစ့်ထဲ ထည့် ပြပေးရဖို့လား။
ကျနော်က အိတ်ဇဲ သိပ်မကျွမ်းကျင်ဘူးဗျ။
စာရင်းအင်း လုပ်တတ်သူတယောက်ယောက်ဆို ပိုအဆင်ပြေမလားလို့
စာရင်းကို လုပ်တော့ လုပ်တတ်တယ် ဒါမယ့် လုပ်ပြီးသားထဲ ထပ် ထပ် ဖြည့်ဖို့ကို
အရှင်အဖြစ် ပိုစ့်ထဲ မထည့်တတ်တာ
Excel နဲ့ လုပ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ခမျ ပို့စ်အောက်မှာ ကွန်မန့်အဖြစ် ဘယ်သူက ဘယ်လောက် လှူတယ်ဆိုတာလေး ဖော်ပြပေးဖို့ပါ ။ ကျနော့်ဆီက ကွန်နက်ရှင်က အမြဲမကောင်းသလို ဘယ်သူက ဘယ်လောက်လှူတယ်ဆိုတာလည်း ချက်ချင်း မသိနိုင်လို့ပါ အဲ့တာလေးကို မရွှေအိနဲ့ ချိတ်ဆက်ပီး ဆောင်ရွက်ပေးပါလားလို့ အကူအညီတောင်းတာပါ ခမျ
Acc No. : 0016600100035629
Name : Daw Ei Kyipyar Soe
NRC No. : 8/MaKaNa(N)160312
CB Bank (Sayar San Plaza)
အကောင့်ထဲကို လွှဲချင်ရင် ဆရာစံဘဏ်ခွဲကိုရောက်ပါမယ်။
မှတ်ပုံတင်နဲ့ငွေလွှဲချင်ရင် CB Bank ၀ိဇယ ဘဏ်ခွဲကို လွှဲလို့ရပါတယ်။
တဦးချင်းစီ.. တတ်နိုင်သလောက်လိုက်ပံ့ပိုးနေတာထက်စာရင်.. ထူးချွန်တဲ့ကလေးတဦးထဲ.. ပုံအောတာက.. ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်.. မငြင်းလို..
တဦးချင်းစီကတော့.. ကြိုက်သလောက်ဖြည့်.. မပြည့်ရေးချမပြည့်အပြင်.. ဒါက.. အစိုးရဆိုတဲ့လူတွေအလုပ်ဖြစ်ကြောင်း…
ယူအက်စ်ရောက်ဆိုင်ရာ မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုလည်း.. ပညာရေးဘက်ဂျက်တိုးပေးနိုင်ဖို့..တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းပြောလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါကြောင်း..
လူထုအလုပ်ကလည်း… ကိုယ့်အခွန်ငွေတွေကို.. ဘက်ဂျက်ကိုင်ရတဲ့.. အမတ်တွေ..ပညာရေးမှာတိုးပေးနိုင်မှသာ.. မဲထည့်မယ်ဆိုတဲ့ဖက်ဆွဲသင့်ကြကြောင်း..
ပိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့.. အခုဟော့လာတဲ့.. ဖုံးကဒ်ကြေးတွေကို ..၅ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ကောက်တာမှာ.. အဲဒီ၅%ရဲ့.. ၂၀% ဒါမှမဟုတ်.. နှုန်းတခုခုကို.. ဆိုင်ရာပြည်နယ်..ပညာရေးဘက်ဂျက်ဖက်သွားဖို့… ကင်န်ပိန်းလုပ်သင့်ကြောင်း..။ အဲဒါကို ရွေးကောက်ပွဲကတိပေးနိုင်သူကိုသာ မဲထည့်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သင့်ကြောင်း..။
အလုပ်အကိုင်မရှိ.. ပိုပိုလျှံလျှံထိုင်စားနေသူများကို.. ထောက်ပံ့ပေးလှူနေတဲ့ငွေတွေကိုလည်း.. တိုင်းပြည်အနာဂါတ်ကလေးပညာရေးဖက်မျှဝေတော်မူကြပါမည့်အကြောင်း..ကန်င်ပိန်းများလုပ်သင့်ပါကြောင်း..။
တနှစ်တနှစ် တော်တော်ကြီးများ.. စားဝတ်နေရေး… ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ..။ သန်းပေါင်း ၃ထောင်ကျော်.. ရှိတဲ့ငွေရဲ့.. ၁%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရရင်တောင်.. ဒေါ်လာသန်း၃၀ဖြစ်ပါကြောင်း..။
ထုံးစံအတိုင်း..ထပ်ပြောရရရင်တော့.. ၁သိန်းအထိ.. 1:1 Match မယ်လို့ဆိုချင်..
သဘောက.. ထူးချွန်ကလေးအတွက်.. ၁သောင်းအလှူရရင်.. ကျုပ်က၁သောင်း လှူမယ်..။
တဂျီး တို့ ကွန်ဖန်း ဆိုရင်သာပြောပါ။
ဒီကြားထဲ လှူချင်တဲ့ ဦးရေ အတွက်နဲ့ ပုံမှန် အလှူငွေကို အမတ်မင်း ကို ပြောလိုက်ပါ့မယ် ကိုရင် ထွန်းး
မမချွိ ကမတ်က အလုပ်မအားဘူးလို့ပြောပါတယ် ခမျ ကိုထူးဆန်းကလည်း အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာ ပျော်နေပါတယ်တဲ့ ဒီတော့ ရန်ကုန်က အလှူရှင်တွေ နိုင်ငံခြားက အလှူရှင်တွေ မရွှေအိထံ ဆက်သွယ်ပေးကြပါလို့
မန်းလေးက အလှူရှင်တွေကတော့ ကိုပေါက်ထံ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းပေးကြပါလို့ နှိုးေ်ပါရစေ
သူကြီးမင်း ကို အကြံပြုဖို့ စဉ်းစားနေတုန်း
ဒီရက် အတွင်း …..
. အနာဂါတ် ရဲ့ အကြိုပိုင်းလော့ ခေး ၏ မျက်နှာပေး လေးကြောင့် လည်းကောင်း
. မောင် ဟုခေါ်သော စကားစု များ၏ အလုပ်ပေးမှု ကြောင့် လည်းကောင်း
. အေအေ ဂျန်နရယ် ကြီး ၏ မာထန်ထန် ပုံစံ နှင့် စွဲဆောင် မှုအားကောင်း သော အမူအရာ ကြောင့် လည်းကောင်း
. စိတ်အေးချမ်းမှု ရသော ပန်းကလေး များ ၏ သိမ်းသွင်းမှု ကြောင့် လည်းကောင်း
“၎င်း” “လည်းကောင်း” များက distract လုပ်နေ သောကြောင့် သူကြီးမင်း ၏ ဖိတ်ခေါ်ချက် ကို မြင်သော် “လည်း” ကြန့်ကြာ နေသည် ကို ခွေးလွှတ်ပါ။
ဆရာလေး ကိုလဲ တောင်းပန်ပါတယ်။
စကားလုံးများ အတွက် စင်တင်ပေးသူ ဒေါ်မမ ကိုလည်းကောင်း၊ ပို့စ်တင်ပေးသူ ဆရာလေး ကိုလည်းကောင်း၊ ထပ်မံ ပံ့ပိုးရန် ရှိသူ သူကြီးမင်း ကိုလည်းကောင်း ကျေးဇူးပါ။ :-)))
သူကြီးရေ ကျနော့်ဘက်ကတော့ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပါ သူကြီး အစီအစဉ် အဆင်ပြေတယ်ဆို လက်တို့လိုက်ပါ ဒါကတစ်ချက်
နောက်တစ်ချက်က သူကြီးပြောသလို အာမခံချက်တွေ ပေးနိုင်တဲ့သူကိုမှ မဲထည့်ကြဖို့ အလှူခရီးလှည့်ရင်း ဟောပြောပွဲတွေ လုပ်လိုက်ရရင် ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ်
ကိုရင်တို့အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့.. . အသင်းအကြောင်းတို့.. ဘာလုပ်ခဲ့တယ်..လုပ်ရန်ရှိသည်တို့ကို.. စာရေးပြီး ဖလိုင်ယာလေးလုပ်ထားတာရှိလား..။
၀င်ငွေ..ထွက်ငွေ.. စတာတွေကို.. ဘယ်လိုအကောင်းတန့်..စာရင်း..ဇယားနဲ့.. လုပ်ပါတယ်..။
နိုင်ဂျံဂါးက.. များတဲ့ငွေအလှူတွေက.. အဲလိုဟာမျိုးတွေဆီမှ(ဆီမှ) ငွေပေး..ငွေယူ..ငွေလှူလို့ရတာမို့ပါ..။
ပညာအတော်ဆုံးကလေးကို.. တောက်လျှောက်ယူအက်စ်မှာကျောင်းလာတက်နိုင်တဲ့အထိ.. ထောက်ပံ့ချင်တာ…။
အဲလိုလုပ်ဖို့… အဲလို.. စာရင်းဇယားတွေလိုပါတယ်…။
ကျနော်တို့အဖွဲ့လေးလို့ ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းအလှုပ်ရှားရဆုံးက ကျနော် တစ်ဦးတည်းပါ အလှူငွေ ရရှိရေး အလှူပစ္စည်းတွေ ကျနော်တို့ဒေသကို ရောက်ရှိရေး ဒေသကို ရောက်လာပြန်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းလေးတွေကို အလှူပစ္စည်း ရောက်ရှိရေးတွေက အစပေါ့ ။ လောလောဆယ်ဆယ်အနေနဲ့ စာရေးကိရိယာတွေ လှူတယ် ကျေးရွာတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ မပြီးမြောက်နိုင်သေးတဲ့ စာသင်ဆောင်လေးတွေကို ပြီးမြောက်နိုင်အောင် အွန်လိုင်းမှာ အလှူရှင်ရှာဖွေပေးပြီး တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ အဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာ စာသငကျောင်း သုံးကျောင်းနဲ့ သဘာဝစိမ့်စမ်းရေရရှိရေး တစ်ခုကို ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့စတင်စဉ် အဖွဲ့အစည်းပုံစံ မဟုတ်ခဲ့လို့ စာရင်းတွေကို အဖွဲ့သားတွေ အချင်းချင်းပဲရှင်းလိုက်တာမို့ စာရင်းပြုစုထားတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မန်းဂဇက်က စာရေးကိရိယာတွေလှူခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃/၁၄ ခုနှစ်ကစပြီး စာရင်းပြုစုထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဝဘ်ဆိုဒ်တည်ထောင်ထားတာလည်းမရှိပါ။ ကျနော့်အဖွဲ့လေး၏ လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းပုံများ သူကြီး၏ ဆိုဒ်တွင် အကုန်လုံးနီးပါးရှိနေပါသည်။ အပြင်တွင် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ မရှိပါခမျ
အခုလိုထောက်ပြဆွေးနွေးပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးပါ ကျနော့်အဖွဲ့နှင့် သူကြီး လုပ်ဆောင်လိုသည့်အချက် ကိုက်ညီမှုမရှိနိုင်ဟု ယူဆလျှင် ကျနော်တို့ဒေသမှ ပညာရေးဖောင်ဒေရှင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ယင်းမှာဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်သဖြင့် သူကြီးလိုချင်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်မိပါကြောင်း
ကျမသဘောကတော့ နွမ်းပါးတဲ့ ကလေးလည်း လှူချင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကို ရုပ်ဝတ္ထုပဲပေးတာက တကယ် တိုးတက်ကြောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ ကျမတော့ မြင်ပါတယ်။
ကျမ ကျောင်းထားပေးဖူးတဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းဆက်မနေ ပညာမတော်တဲ့အကြောင်း ကျမရေးခဲ့တဲ့ ချစ်စရာ့အရွယ် Cover Story မှာပါပါတယ်။
ပေးတုံးခဏပျော်ပေမယ့် ပြီးရင် ငါတို့ ကြိုးစားမှ ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်မလာပါဘူး။အဲဒါ ဟင်းစားပေးတာပါ။ အခုတလောတော့ ကွန်ချက်ပြတဲ့ အလှူမျိုးကို ပိုအားသန်နေမိပါတယ်။
ကလေးတွေကို ကြိုးစားစေချင်ရင် Role Model ကောင်းလေးပြရပါမယ်။အဲဒါဟာ ထူးချွန်ကလေးကို ဂုဏ်ပြုကြပါလားလို့ မျက်မြင်တွေ့ခြင်းပါပဲ။
ကိုပေါက်ပြောသလို မိဘချမ်းသာလို့ ကျူရှင်ထားနိုင်လို့ တော်တဲ့ကလေးလည်း ရှိနိုင်ပေမယ့် တော်ပြီဆိုကတည်းက ကလေးကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါပဲ မပြီးပါဘူး။ကျမတို့ ဆုချမယ့်မူမှာ ကလေး အမှတ်ချင်းတူရင် မိဘ နွမ်းပါးတဲ့ကလေး၊မိဘ မစုံလင်တဲ့ကလေး၊ပို ချောင်ကျတဲ့နေရာမှာ နေတဲ့ကလေးကို ဦးစားပေးမယ်လို့ ထည့်ရင် ပိုသင့်မယ်ထင်ပါတယ်။(ကျမတို့ မြို့က သခင်သိန်းဖေဖောင်ဒေးရှင်း ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးရာမှာတော့ အဲသလို ကန့်ထားပါတယ်)အမှတ်သာနေရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူး။
ဦးပါပြောသလို စပွန်ဆာ မဖြစ်စလောက်နဲ့ ဒကာခံချင်တာ ဆိုတာမျိုးတော့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး။ကျမတို့ ပေးမယ့် ဂုဏ်ပြုဆုပဲ ယူရမယ်လို့ ကန့်သတ်ထားတာမှ မဟုတ်ပဲ။
ဂုဏ်ပြုသူများလေကောင်းလေပေါ့၊ဘာမှမဆိုင်တဲ့ အဝေးကြီးက ဂဇက်မန်ဘာတွေကတောင် ဆုချတယ်ဆိုတာလေးက ကလေးတွေအတွက် အတော်အားတက်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ကြုံတုံးကြွားရရင် ကျမ ၈တန်းတုံးက ၆ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရပါတယ်။ ဆုပေးပွဲမှာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာတွေရဲ့ သီးသန့်ဆု( ဗလာစာအုပ်+ဘောပင်တွေပါပဲ)ကို ကျောင်းသား အားလုံးရှေ့မှာ အကြိမ်ကြိမ်ထွက်ပြီး ယူရပါတယ်။နောက်နှစ်တွေမှာ ကျမတို့ကျောင်းက ၈တန်း ၆ဘာသာဂုဏ်ထူး ၂ယောက် ထပ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်(နောက်ပိုင်း ကျောင်းစစ်တွေဖြစ်သွားပါတယ်)ဆိုလိုချင်တာက ဆုပမာဏက အဓိကမကျပါဘူး။
Acknowledgement အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဟာ Motivation စိတ်အားထက်သန်ဖို့ အကောင်းဆုံးဆုပါ။
(မတူသောအမြင်နဲ့ ချစ်ကြည်စွာ ကွဲလွဲပါရစေ)
ကျမ အစက စိတ်ကူးတာ နွမ်းပါးကလေးတွေ ၁၀ ယောက်စာ 21000 နဲ့ ထူးချွန်ကလေး ဆုချရင် 30000 ပေါင်း 51000 လှူမယ်စိတ်ကူးပါတယ်။
အခု သူကြီး ချဲလင့်မြင်တော့ ကပ်စေးနည်းသူကြီးရဲ့ အလှူ ၁သိန်းကို ရအောင် ယူချင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ထူးချွန်ကလေးဆုချဖို့ ရွာသူရွာသားတွေဖက်က ၁သိန်း မပြည့်ခဲ့သည် ရှိသော်(ကျမကတော့ ကျော်တောင် သွားမယ်ထင်မိ) ကျမအလှူငွေကို ၁သိန်းပြည့်အောင် အဲဒီဖက်ပဲ ဖြည့်လှူပါမယ်။အကယ်၍ ကျော်/ပြည့်ရင် မူလအစီအစဉ်အတိုင်းလှူပါမယ်။ရွာသူရွာသားများ ကူကြပါနော်။
အံတီဒုံတွေးသလိုလေး ကျနော်တွေးထားတာဗျ ဒါပေမယ့် ဘာမှ မပြောသေးပဲ တိတ်တိတ်လေးနေနေတာ သူကြီးက ကပ်စေးနှဲနေတာတော့ အမှန်ပဲဗျ . . . .
ကျုပ်ဆီက ငွေထွက်စေချင်ရင်တော့.. နည်းနည်းအလုပ်တော့လုပ်မှ..
1:1 နဲ့လိုက် Match မှာမို့.. ချက်ချင်း၂ထောင်ဖြစ်မှာပဲလို့..မှတ်လိုက်…။
ကျုပ်ရဲ့ငွေတပြားစီက.. ကာယ၊ဥာဏစွမ်းနဲ့သေသေချာချာအလုပ်လုပ်ပြီး.. ရထားတာချည်း…။
အဲဒီလိုအလှူငွေရတဲ့သူမှာလည်း.. ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေ ၀င်ကိုဝင်သွားမှာအသေအချာ…။
ထူးးချွန်အတွက် ရွာသူရွာသား တွေ ဘက် က တစ်သိန်းကျော်ရင် ဘိုလို လုပ်မလဲ ကြိုပြောအူးးးး
ဒီမယ် သူကြီး ခင်ဗျားငွေ တစ်ပြားစီ ကာယ ဥာဏစွမ်းနဲ့ သေသေချာချာ အလုပ်လုပ်ပီး ရထားတာချည်းပဲဆိုတော့ ကျုပ်တို့လက်ထဲကငွေကျတော့ အလကားပဲရထားတာလိုလိုဖြစ်မနေဘူးလားးး)))P
ကျုပ်တို့ငွေတွေဟာလည်း ချွေးနဲ့ သွေးနဲ့ရင်းထားရတဲ့ငွေတွေပါပဲဗျ
ဒီပို့(စ) စတစ်ကီ လုပ်ပြီး အလှူငွေရဖို့ ဖွပေးတဲ့ မျက်နှာထောက်ထားလိုက်ပါ။
ဒါနဲ့ အလှူငွေက လ ကုန်နားနီးမှ လွှဲဖို့ အဆင်ပြေမှာ ကိုရင်ထွန်းးး
သူကပ်စေးနဲသင့်တာ လည်းး အမှန်
ကျနော် ကတော့ ကျော့် အာတီဒုံ ဘက်က ပါမယ်
အာ့ကြောင့် ကျော်ဆီက နှစ်သောင်းး စ တွက်ပါ ခင်ညာ…!!!
အိုကေ မမချွိ ကျနော်ကလည်း ထူးချွန်ကျောင်းသားအတွက် သုံးသောင်းလှူပါ့မယ် ။
ကပ်စေးနည်းတယ်ပြောတာကို ကျွဲမြီးမတိုပါနဲ့ သူကြီးရယ်။ကျမက ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ကပ်စေးနည်းတယ်လို့ပဲ ဖွင့်ဟ၀န်ခံတတ်ပါတယ်။
ဘာလို့ဆိုတော့ ကျမတို့ ရွာသူားအားလုံး ကိုယ့်ကာယဉာဏနဲ့ ရင်းပြီး ရှာထားကြသူတွေချည်းပဲမို့ သမ္မာအာဇီဝငွေလေးတွေဖြစ်လို့ပါ ၊တကယ်အကျိုးရှိရာမှပဲ သုံးချင်ကြလို့ပါ။
သူကြီး အလှူတွက် သာဓု အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ မမချွိ လကုန်ရက်လောက်မှ လွဲဖြစ်မှာဆိုတော့ အလှူခံနောက်ဆုံးရက်ကို ဇွန်လပထမအပတ်နောက်ဆုံးလောက်ထားကြတာပေါ့နော့
ဟုတ်ပါ့ အံတီဒုံ ကပ်စေးနှဲတာတော့ ကျနော်လည်း ကပ်စေးနှဲတာပါပဲ
ဇွန်လ ၇ရက်နောက်ဆုံးထား.. ထူးချွန်ကျောင်းသားအတွက်.. ရတဲ့အလှူငွေပြောပါခင်ဗျ..။
1:1 နဲ့Match ပြီး.. လွှဲပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း..။
အလှူငွေရတဲ့.. ကျောင်းသားရဲ့..ဓာတ်ပုံနဲ့.. ကိုယ်ရေးအကျဉ်းလေးလည်း…လိုချင်ပါကြောင်း..။
အနော်လည်း လှူပါမယ်.. မရွှေအိကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ်…
အထူးချွန်ဆုံးကလေးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ နည်းနည်းလေး အတွေးဝင်မိတယ်.. နယ်ဘက်တို့ ရွာဘက်တို့က ဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေကတော့ အောင်မြင်ပြီဆိုရင် ရိုးသားကြတာများပါတယ်.. ဆယ်တန်းဆိုတာကလည်း စာမေးပွဲတွေအားလုံးထဲမှာတော့ သန့်ရှင်းတယ်လို့ ဆိုလို့ရမလားပဲ…
အဲ..တစ်ခုပဲ.. တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဆယ်တန်းဆိုတာ နောက်က အားပေးမှုအများကြီးပါတယ်.. အရမ်းတော်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်က နောက်က မပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့လို့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သူထက် အမှတ်များသွားခဲ့တာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်…
လျှာရှည်ပြီး ကန့်လန့်တိုက်တယ် မထင်စေလိုပါ.. :D သများရင်ထဲမှာ ခံစားချက်တွေရှိနေလို့. လာပြောတာ..
အမှတ်နည်းသွားတာ လို့ ပြောချင်တာ.. မှားသွားလို့
-အတော်ဆုံး ငါးယောက် လောက် တန်းစီပီး လှူချင်တယ်
-တစ်ယောက်ထဲကွက်လှူရတာ မမျှဝူးထင်လို့ ..
.အခုမှ ထပ်ဝင်ဖြစ်လို့ သူကြီးကို ကြပ်မယ့်အစီအစဉ်ကို ကံကောင်းလို့မီသွားတယ်..
.၀င်ပါချင်တဲ့သူတွေများမှာမို့ သူတို့ကိုငဲ့ပြီး တစ်သောင်း အရင် စာရင်းပေးပါတယ်..
.တကယ်လို့များ……….. ပေါ့ ….. လေ…
.အရမ်းကောင်းမှာပဲ… လို့လဲ တွေးမိတယ်..
.ဥပမာ စနေနေ့ (အများစုအားတဲ့နေ့)
.နေ့လည် ၁ နာရီက ၃ နာရီကြား (အများစုအားတဲ့အချိန်- range က ၂ နာရီဆိုလုံလောက်တယ်)
.တောင်ငူကင်တင်း (သွားလာလို့ အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ ထိုင်စောင့်စားသောက်လို့ဈေးသက်သာတဲ့နေရာ)
.ရွာသူရွာသားတွေကို မတွေ့ရတာကြာလို့ လွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ တောင့်တမိတာပေါ့နော…
သူကြီးကို ကြပ်မယ့်အစီအစဉ်ဆိုတော့လည်း ရွာသူားပီသအောင် ပါဝင်ရတာပေ့ါ။
ထူးချွန်ကလေးအတွက် ၁၀၀၀၀၊ နွမ်းပါးကလေးအတွက် ၁၀၀၀၀ လှူပါမယ်။
ကလေးရဲ့ကိုယ်စား အလှူရှင်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပါသဗျာ
အံတီဒုံနဲ့ မအိရေ ဦးဦးပါလေရာပြောတဲ့ အစီအစဉ်လေးကကောင်းသားဗျ အချိန်ပေးနိုင် အဲ့လို လူစုလိုက်ပါလား ရွာသူားတွေလည်းဆုံရ အလှူငွေလည်းရ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့ ကမတ်ကပြောတယ် အံတီဒုံကို အကူအညီတောင်းပါတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပါ ပေးလိုက်တယ် ခမျ
ဗိုလ်ထွန်းရေ ကျွန်တော် ဗိုလ်ပေါက်နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်ဗျ။
ဒါနဲ့ မန်း ရောက်ဖြစ်ရင်လဲ လှမ်းချိတ်ပါအုံးနော် ဆုံကြအုံးစို့။
ဟုတ် လေးခ ကျနော်ဇွန်လဆန်းပိုင်း မန်းလေးကိုလာမယ်ခမျ ဖုန်းချိတ်လိုက်ပါ့မယ့် ဆုံချင်ပါသေးတယ် ခင်ဗျ။
အခုတော့ သူကြီးမင်း အတွက် အလှည့်
ပညာအတော်ဆုံးကလေးကို.. တောက်လျှောက်ယူအက်စ်မှာကျောင်းလာတက်နိုင်တဲ့အထိ.. ထောက်ပံ့ချင်တာ…။}
အင်မတန် ကောင်းမြတ်တဲ့ စိတ်စေတနာ လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ စေတနာ ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့က ငွေပေးပြီးကျောင်းစရိတ် ထောက်တိုင်း သူကြီး ဖြစ်စေချင်တဲ့ “ယူအက်စ်မှာကျောင်းလာတက်နိုင်တဲ့အထိ.” ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
အဲဒီ ကလေး ရဲ့ နောက်ခံဘက်ကရောင်း က ချို့တဲ့ နေတာမို့ သူတို့ မိဘ များ အနေနဲ့ ဒီကလေး ကို ငွေအားရော၊ အကြံဉာဏ်ပေးမှု အား ပါ တတ်နိုင်မယ်မထင်ပါ။
. မြန်မာပြည် က သာမာန်နယ် ကျောင်း မှာ တက်မဲ့ ကလေး တစ်ယောက် ယူအက်စ် ကို ရောက်နိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ ကျောင်း က ဆရာများ ကလဲ အကြံပြု တွန်းအားပေး နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
ဒီအတိုင်း ကြက်တူရွေးကျက် နဲ့အမှတ်များ သလား၊ သူ့ အရည်အချင်း အရ အမှတ်များသလား။ ဘာနဲ့ ခွဲခြားနိုင်မှာလဲ။
တစ်ချို့ ကလေး တွေ အမှတ်ကောင်းတာ ဒါဘဲကျက် ဒါဘဲ ဖြေ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုး မိတာ တွေ လဲ များပါ့။
ကျွန်မ အကြံပြုရရင် သူကြီး အနေနဲ့ တကယ်ဘဲ ကလေး တစ်ယောက် ကို ပျိုးထောင်ပေးချင်ရင် အမှတ် ထက် IQ ရော EQ ပါ ကောင်း တဲ့ ကလေးမျိုး ရှာသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုရှာမလဲ ဆိုတာတော့ သူကြီးမင်း ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း ကြည့်သင့်သလားဘဲ။
ကလေး တစ်ယောက်ခေါ်ဖို့ စရိတ် က မနဲတာမို့ ကုန်ကျ ရကျိုး နပ်အောင်ပါ။
ကျနော် တစ်သောင်းလှူပါ့မယ်။ ထူးချွန်ကလေးအတွက်ပါ။
ကျန်တဲ့ ကျောင်းသုံးထောက်ပံ့မှုကတော့ လစာ ကြည့် ပြီး ထပ်လှူပါ့မယ်။
တီဒုံဆီ ပို့ဘို့ လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်။
တကယ်တန်းပြောရမယ်ဆို ခု ကိုထွန်းဝင်းလတ် လို ရွာသားတယောက် အခံရှိလို့ သူ့ နယ်က ကျောင်းလေးတွေ အကြောင်း သိခွင့်ရ လှူခွင့်ရတာပါ။
ဆရာမဒေါ်မေအေးဦး ဆီမှာလည်း လိုအပ်နေလို့ ကူညီပေးပါဆိုပြီး လျောက်လွှာ တင်ထားကြတာ တပုံကြီး။
နာဂစ် ဒေသကနေ ဆင်းရဲချို့တဲ့ပေမယ့် ထူးချွန်စွာအောင်မြင် ကျောင်းဆက်တက်ဘို့ အခက်အခဲရှိနေသူတွေ အများကြီး။
နာဂစ် ဒေသအတွက် နောက်ထပ် တယောက်လောက်ပါ ထပ်စဉ်းစားပေးကြပါလားခင်ဗျာ။
ဇီဇိပြောတဲ့ ပိုနေရင်ကော ဆိုတဲ့အမေးအတွက် အကြံပြုချက် တခုလို့ သာမှတ်ပေးပါ။
ဒီတခါ ကချင်အတွက်စုကြရင်း နာဂစ်ဒေသအတွက်ပါ မှန်းလိုက်ကြတာပ။
( စကားမစပ် ကထွန်းဝင်းလတ် ပို့စ်မှာ ဘယ်ဒေသဆိုတာမပါဘူးဗျ။ အရင်လှူဘူးပေမယ့်
အတိအကျလေး ပြန်ဖြည့်ပေးစေခလို )။
ဆရာမမေအေးဦးလည်း အဲလို အလှူ ခံ ကလေးတွေအတွက် အလှူရှင်ရှာနေရတာကို အားဖြည့်ပေးရာလည်းရောက်စေချင် မန်းဂေဇက်ပညာသင်ဆု ဆိုတာလေးလည်းပြန့်စေချင်မို့
ပြန်ချုပ်ရရင် ထူးချွန်ကလေးတဦး သူကြီးဆီကတသိန်း ရွာသူ သားတွေဆီက တသိန်း
ပေါင်း ၂သိန်းကျပ် တကြိမ်တည်းရသွားမယ်။ ဆက်လက်ထောက်ပံ့ဘို့ သူကြီး စောင့်ကြည့် စီစဉ်မယ်။
ရွာသူ ရွာသားတွေ စုတာ တသိန်းထက်ပိုသွားရင် ဆရာမဒေါ်မေအေးဦးဆီမှာ တယောက်လောက် တောင်းပြီး လှူဘို့ စဉ်းစားပေးစေချင်ပါသဗျ။ ထပ်ဖြည့်ပေးကြပါအုန်း။
သတင်းထည့်ပေးရင်း.. နောက်နောင်အတွက်.. အစီအစဉ်တွေဆွဲကြည့်မလို့…။
ဆရာမပို့ပေးထားတဲ့ အလှူ နိုးဆော်စာ။
Now is the time to ask education support for coming education year 2015-16.
The student list is attached and please check the sheets named “PYAY” and “DDY”
For the time being, 61 Distance University and High School students have sent application to me.
In the donor’s name column, I still keep the last year donor’s name. So that you can easily pick up your students.
For one year expense for One student is 150,000 Ks.
If you would like to help them, please email me or give meacall to 09-4200 94929, 09-7303 9878.
Thank you so much to you all for your kind support.
Excel files ကို ကော်ပီ ကူးကြည့်တာ
Sr. No.	Name	Gender	Date of Birth	Age	Standard	School	Father’s name	Parent’s Job	Address	School fees/year	in terms	Donor	Donation Recd.	Jun	Aug
1	Nyein Nyein Aye	F	MME 1357	20	3rd year, Myanmar	Pyay Distance University	Kya-Pin Village, Thae-gone Township, Bago Region	150,000	one year	Ma Tin Tin Hla (from Australia)
2	Yadanar Moe	F	1359	17	1st Year, English	Pyay Distance University	U Soe Thein	Farmer	Dhamma-Thaw Village, Pauk Khaung TS	120,000	one year	Dr. Kyaw Min Soe, Dr. Khin Oo May, Aung Pyae Phyo, Kyi Sin Soe
3	Aye Myat Thu	F	1996	18	1st Year, English	Pyay Distance University	U Hla Wai	no permanent job	Kan-thar-yar Village, Pyay TS	120,000	one year	KoThura Thant Zin & Ko Soe Moe
4	Mai Theingi Tun	F	1998	16	1st Year, Myanmar	Pyay Distance University	U Aung Win	Farmer	Lay Thar Taunggyi village, Paukkhaung TS	100,000	one year	Ko Luu Maw + Ma Aye Thazin Min, son Julio Han Min Luu & Weiyan Toe Luu
5	San Ein Thu	F	1358	18	1st Year, Myanmar	Pyay Distance University	U Kyi Naing	Farmer	Dhamma-Thaw Village, Pauk Khaung TS	120,000	one year	Mr. Sunil & Mrs. Chirasmi Shrestha Family
6	July Htun	F	1359	17	1st Year, BM	Pyay Distance University	U Aye Soe	Farmer	Hlwa-Zin Village, Pyay TS	120,000	one year	U Mg Lwin + Daw Nyunt Nyunt Family
7	Pyae Sone Aung	M	1362	15	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Kyi Lwin	Farmer	Bauk-Chone-Gyi Village, Thae-Gone TS	150,000	one year	Ko Kyaw Htut + Ma Htay Htay Khin
8	Phyo Wai Hlaing	M	1362	15	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Kyaw Win Hlaing	Farmer	Salon-San Village, Ht, Pauk Khaung TS	150,000	one year	Ko Maung Maung Swe
9	SaLai Kyaw Win Naing	M	1362	15	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Bai Pu	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year	Ko Htet Nay Win + Ma Aye Thandar Zaw, son Nyan Lin Htet, daughter Hsu Thada Lin Htet
10	Salai Ya Wai Aung	M	2000	15	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Kyae	Farmer	Byan-di Village, AungLan TS, Magwe Region	150,000	one year	Mr. Gary Ong
11	Aye Thida Khaing	F	1999	16	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Tin Aye	Passed away	Na-Lan Taung, Pauk Khaung Ts	150,000	one year	Ko Min Htun + Ma Kaythi Aung, son Aung Min Hein, daughter May Phu Pwint
12	Mai Moe Khan	F	1361	16	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Khin Maung Win	Farmer	Lay-tha-taung-gyi Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year	phanMeeEin Group
13	Mai Nandar Win (1)	F	05-Oct-98	17	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Hla Kyaing	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year	Ko Thura Nyunt+ Ma Ni Ni Ko, Son : Kyaw Min Thu , Daughter : Su Myat Noe Wai
14	Mai Thandar Aung	M	1361	15	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Aung Khine	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year	PhanMeeEin Group
15	Mai Hla Hla Win	M	1359	17	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Win Maung	Farmer	Kan-Kyoe Village, Pyay TS	150,000	one year	Dr. Nu Nu Lwin & Ma Thida Tun = 120,000 ks. , 2000GROUP = 30,000 ks.
16	Mai Hnin Moe Aye	M	1361	15	Matriculation	B.E.H.S(5), Pyay	U Hla Ngwe	Farmer	Ngwa-Myaw Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year	Ma Khin Nilar Win
17	Salai Chan Nyein	M	13-Jun-00	15	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Kyi Aung	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year
18	Lin Lin Htun	M	1361	15	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Hla Than	Farmer	Salon-San Village, Ht, Pauk Khaung TS	150,000	one year	Ko Moe Swe + Ma Myo Thuzar Hlaing, daughters Yati Lin lett , Kyal Sin Lin Lett
19	SaLai Aung Tin Lin	M	1363	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Aung Myint Sein	Farmer	Kayin-Ate Village, Pauk Khaung, Bago	150,000	one year	Ma Tin Mar Cho
20	Salai Zaw Zaw Myo	M	1362	15	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Aung Tun Shein	Farmer	Ngwe-Twin-Tuu Village, Pauk Khaung, Bago	150,000	one year	Ms. Elaine Lim Hui Chun and son Adam Tan
21	Mai Yadanar Aung	F	1362	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Aung Thin	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year	Ko Tin Myint Zaw + Ma Cho Cho Win Family
22	Mai Hay Mar Aung	F	1362	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Tin Aung	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year	PhanMeeEin Group
23	Mai Yi Yi Aung	F	1361	15	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Kyaw Kyaw	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year	PhanMeeEin Group
24	Mai Cho Cho Win	F	1362	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Tin Nyo	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year	Ko Aung Kyaw Naing
25	Mai Htay Htay Win	F	1361	15	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Pan Sein	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year	“Ko Htoo Aung + Ma Hnin Yu Yu Ko
daughters: May Phyu Thwe & Kyi Lei Phyu”
26	Sandi Phyo Wai	F	1362	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U San Yu	Farmer	Site-Hae Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
27	Mai Thandar Htwe	F	1361	15	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Phoe Sae	Farmer	Lay-tha-taung-gyi Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
28	Mai Ngwai Ngwai Aung	F	2002	13	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Than Phae	Farmer	Ngwa-Myaw Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
29	Mai Nandar Hlaing	F	1362	13	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Bo Htwe	Farmer	Lay-tha-taung-lay Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
30	Mai Thin Nandar Oo	F	2001	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Phoe La	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year	“Ko Htoo Aung + Ma Hnin Yu Yu Ko
31	Saw Myat Mon	F	2002	13	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Myint Htay	Farmer	Le-ma Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
32	Mai Moe Thida Htwe	F	1362	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Chit Win	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year	Nyan Win + Nyo Nyo Aung Kyaw family
33	Mai Cho Zin Aung	F	1999	16	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Min Min	Passed away	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year	“Ko Htoo Aung + Ma Hnin Yu Yu Ko
34	Salai Zin Ko Htwe	M	1362	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Tin Aung	Farmer	Byan-di Village, AungLan TS, Magwe Region	150,000	one year
35	Saw Suu Sha Aung	M	2000	15	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Myint Thein	Farmer	Sauk-Chone-Gyi Village, ThaeGone TS	150,000	one year
36	Chan Pyae Oo	M	2001	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Tin Htay	Farmer	Pa-tauk Kyaw Village, Htan-ta-pin Village Group, PaukKhaung TS	150,000	one year
37	Salai Aung Kyaw Tun	M	1363	14	Grade 10	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Kyaw Shwe	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year
38	SaLai Myo Htet Aung	M	1363	15	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Tin Aung	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year	U Htun Aung Kyaw + Daw Than Than Aye Family
39	Salai Ye Aung	M	1363	15	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Sein Lay	Farmer	Ngwa-Myaw Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
40	Zaw Zaw Htet	M	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Nyi Than	Farmer	Za-Lun-San Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
41	Aung Nyein Chan	M	2002	13	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Khin Maung Soe	Farmer	Ka village, Kan-kyin Village group, Pauk-khaung TS	150,000	one year
42	Salai Kyaw Ye Aung	M	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Aung Nyein	Farmer	Shwe-Laung village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
43	Salai Ye Htet Kyaw	M	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Chit Tun	Farmer	Ai-Nyi-Naung Village, Pauk Khaung TS	150,000	one year
44	Mai Theingi-Win	F	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Hla Kyaing	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year	Ko Ye` Min Swe + Ma Myo Myo Thein
45	Mai Moe Moe Myint Aung	F	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Maung Mya	Farmer	Ngalu-San Village, Pauk Khaung, Bago	150,000	one year	Ma May Htar Htar Oo
46	Mai May Myanmar Htwe	F	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Tin Mya	Farmer	Shwe-Laung village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
47	Mai Kyaw Zin Htay	F	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Kyaw Htwe	Farmer	Le-lu village, Htone-taung, Pauk-khaung TS	150,000	one year
48	Mai Mon Mon Htwe	F	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Tin Myint	Farmer	Ngwa-Myaw Village, Pauk-khaung TS	150,000	one year
49	Mai Zin Thu Tun	F	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Hla Myint	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year	Ma Lei Lei Soe
50	Mai Pa Pa Aung	F	2001	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Maung Aye	Farmer	Thi-tin-pin village, Pauk-khaung TS	150,000	one year	Ko Aung Thant Naing+Ma Khine Khine Win=Thar Min Thuta
51	Ye Phone Kyaw	M	10-Oct-01	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Myo Zaw	Farmer	Sauk-Chone-Gyi Village, ThaeGone TS	150,000	one year
52	Thura Zaw	M	13-Sep-02	13	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Kyi Lwin	Farmer	Sauk-Chone-Gyi Village, ThaeGone TS	150,000	one year
53	Zay Ya Soe	M	2000	15	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Soe Win	Farmer	Dhamma-Thaw Village, Pauk Khaung TS	150,000	one year
54	Mai Akari	F	1363	14	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Min Min	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year
55	Mai Chit Moe Hlaing	F	2002	13	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Kyaw Min	Farmer	Dhamma-Thaw Village, Pauk Khaung TS	150,000	one year
56	Mai Pan Ei Phyu	F	2002	13	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Khin Maung Myint	Farmer	Kyauk-Kwin Village, Pyay TS	150,000	one year
57	Mai Aye Aye Thin	F	1363	13	Grade 9	BEHS, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Win Maung	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year
58	Myat Pan Ei Khaing	F	2003	12	Grade 8	Post Primary School, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Pauk Too	Farmer	Salon-San Village, Pauk Khaung, Bago	150,000	one year	Ko Min Htun + Ma Kaythi Aung, son Aung Min Hein, daughter May Phu Pwint
59	Mai Nandar Win (2)	F	2003	12	Grade 8	Post Primary School, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Maung Kyaw Win	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year	Daw Htay Htay and daughter Ni Lar , Nattlain Town, Bago Div
60	Mai Pa Pa Win Khin	F	2002	13	Grade 8	Post Primary School, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Aung Khaing	Farmer	Kywe-Kalay-San village, Pauk Khaung TS	150,000	one year	Dr. Tun Linn Thein
61	Salai Aung Kyaw Lin	M	2004	11	Grade 6	Post Primary School, Mu-Yar-Pin, Pyay	U Aung Myint Sein	Farmer	Kayin-Ate Village, Pauk Khaung, Bago	150,000	one year	Nan Kay Thi
Distance Uni	6
Matriculation	10	0
Grade 10	21
Grade 9	20
Grade 8	3
Grade 6	1
Light blue highlighted	confirmed donor
awaiting for donors
ပညာရေး ဆို လှူဖို့ တုံ့နှေးတတ်ကြတာ ဘာလို့တုန်း မသိ??
နောင်ဘဝ မှာ စည်းစိမ်ချမ်းသာ သော်လည်းကောင်း
နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီး တစ်ဖက် ၅၀၀ သော်လည်းကောင်း ရမယ်လို့ အာမ မခံလို့ များလားးးး
ခုကလေးတွေက နောက် တစ်ချိန် နိုင်ငံ ရဲ့ တာဝန်ယူရမဲ့ ကလေးတွေပါ။
ယူချင်သည်ဖြစ်စေ မယူချင်သည်ဖြစ်စေ တာဝန် ယူရမဲ့ သူတွေပါ။
တခါတလေကျ တဂျီး ကမ်းတက်မဆိုးလို့မပြောပေချင်ပေမဲ့……
သင်္ကန်း အစုံ တစ်ရာလှူဖို့ လွယ်တဲ့သူတွေက စာအုပ် ၁ ဒါဇင်လောက်ကို လက်တွန့်နေတာ မြင်ဖူးပါရဲ့။
ဘုရား ထီးတော်မှာ ချိတ်ဖို့ စိန်လက်စွပ် ချွတ်ပေးနိုင်သူက ….
လမ်းဘေး ကလေး ကော်ရှု နေတဲ့ ဘဝတွေ မြင့်တင်ဖို့ မတွေးတတ်တာတွေ မြင်တွေ့နေပါရဲ့။
ဒါ အစိုးရ အလုပ်တွေပါ။
အစိုးရမလုပ်လို့ လက်သင့်ရာ လုပ်နေကြရတာပါ။။
ကိုယ်လှူတဲ့ အလှူ ရဲ့ နောက်ဘဝ အကျိုးဆက်ကို မစဉ်းစားလို့ရပေမဲ့
ဒီ ဘဝ ရဲ့ အကျိုးဆက် (ကိုယ့် အကျိုးမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့် အလှူကြောင့် သူများရတဲ့ အကျိုး) ကို
စဉ်းစားမိရင်ဖြင့် ကျနော့ ပိုက်ဆံတွေကို ကလေးတွေ ဆီမှာပဲ ရောက်စေချင်ပါရဲ့။
-ကျနော်က ထူးချွန်အတွက် တစ်သောင်း
-ခလေးဆယ်ယောက်စာအတွက် ၂၁၀၀၀ လှူမယ်
.ကျုပ်လည်း ထူးချွန် တစ်သောင်း
.ကိုထွန်းတို့ကလေး၁၀ယောက်အတွက် ၂၁၀၀၀ လှူ ပါမည်ခင်ဗျား
၂၀၁၅/၁၆ ပညာသင်နှစ်မှာ ကျနော်တို့သွားရောက်လှူဒါန်းဖို့ စာရင်းပြုစုထားတဲ့ မူလတန်းကျောင်းလေးတွေကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင် အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးဒေသမှ ၁။ ကရင်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း ၂။ သက်ရင်းသာကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ၃။ နားခွင်းကျင်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ၄။ ဖားပန်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ၅။ ဥရှစ်ကုန်းကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ၆။ ဆားမှော်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ၇။ နားမကျိုင်းကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ၈။ နားဖာကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ၉။ မူလခေါင်တုန့်စည်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ၁၀။ လေဘိုကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ
အလှူအတွက် ထည့်ရန် ချစ်မမ ထံ နှစ်သောင်းကျပ် ပို့ခိုင်းထားပါသည်။
တစ်သောင်း က စာရေးကိရိယာ
တစ်သောင်း က သူကြီး ရဲ့ မီးခြစ် (Match) အလှူ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ပိုငွေ ရှိသွားပါကလဲ ကျွန်မ အလှူငွေ ကို ဘယ်နေရာမှာ မဆို ရွှေ့ပြောင်း သုံးနိုင်ပါသည်။ :-))
ကျွန်မတို့မှာလဲ ရှမ်းပြည် လဲချား က ကလေး ပညာရေး တွေ ကို ပံ့ပိုး တဲ့ အဖွဲ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက်လုပ်ပေးပေး လုပ်ပေးနိုင်တာ အောက်ခြေ ဘဲ ရမှာပါ။
လူတော်တော်များများ က ကိုယ်တစ်ပိုင်နိုင်ရာ တွေ ဘယ်လောက်ဘဲ လုပ်လုပ် ဒီ အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှာတော့ ဗရမ်းဗတာ ပညာရေး ကိုဘဲ ရနေမှာပါ။
ကလေးများ အနာဂါတ် အတွက် မှိန်ပြီးရင်း မှိန်မို့
ပညာရေးကို တကယ်ဘဲ ကောင်းအောင် လုပ်ပေး ပံ့ပိုးပေးမဲ့ အစိုးရ ကို ရအောင် ရှာပြီး တင်မြှောက်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
အခုချိန်ဟာ တိုင်းပြည် အတွက် အနာဂါတ် တဆစ်ချိုး ကွေ့ မဲ့ အချိန်ပါ။
. အကောင်းဖက် ကို ကွေ့ဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒါမှသာ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ကလေးတွေ ရဲ့ အနာဂါတ် ကောင်းပါမယ်။
တကယ်တော့ သူတို့ ဟာ တိုင်းပြည် က invest ကောင်းကောင်း လုပ်ပေးရမဲ့ လူ resource ကလေး တွေပါ။
အခု သူတို့ ရပိုင်ခွင့် တွေ ဆုံးရှုံးနေတာပါ။
အဲဒါ ကို ပြန်ရဖို့ အားလုံး မှာ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာလေးလဲ သိစေချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် အရီးရေ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းဆီက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မဲတစ်ပြားဆီမှာ ကျနော်တို့ရပ်ရွာ အြို့နယ် ခရိုင် ပြည်နယ်တိုင်း နိုင်ငံကို စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ပေးမဲ့ လူ အစိုးရတစ်ရပ်ကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေပါတယ် ဘယ်သူတက်တက် ငါတို့ပြည်သူတွေက လုပ်စားရမှာ လုပ်စားရမှာပဲ ဆိုတော့ အတွေးမျိုးတွေနဲ့ နေနေကြဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က တတ်နိုင်သလောက်ပဲ ပေးဆပ်ရင်း နေပါရစေတော့
အရီးဆီက အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ (နှစ်သောင်းကျပ်တိတိ) ရပါပြီ။
မအိ ပါ ထူးချွန်ကလေးအတွက် တစ်သောင်း
.အခြားကလေး၁၀ယောက်အတွက် ၂၁၀၀၀ စုစုပေါင်း ၃၁ ၀၀၀ လှူ ပါမယ်
.ရွှေအိ နဲ့ ဆက်သွယ်ပါမယ်နော်
၀ယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများ မော်လူးအရောက်တန်ဆာခ ကို ကျနော်လှူပါမယ်
-ကိုထွန်းဝင်းလတ် အလှူအတွက် ခြောက်သောင်းထည့်မယ်တဲ့
– ၃သောင်းက ထူးချွန်ခလေးအတွက် ကျန်သုံးသောင်းက အခြားခလေးတွေ အတွက် လိုတာသုံးပေးပါလို့ပြောပါတယ်
-အာတီဒုံနဲ့၂ထောင် ဂရုအတွက် အလှူငွေလဲပါတယ်
-လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်ပါမီ ခီညော် ..
ရွှေအိအကောင့်ထဲကို သူကြီးရဲ့ ထူးချွန်ကလေးအတွက် တသောင်းလွှဲပေးလိုက်မယ် မနက်ဖြန်ဖြစ်ဖြစ်
ရွှေအိ ဘဏ်ထဲကို ၄၁၀၀၀ လွှဲလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ပတ် တနင်္လာနေ့ ရောက်မယ် တဲ့။
၁၀ယောက်စာ ၂၁၀၀၀ ပါ။